Kutheni le nto i-transgender iba ngumgangatho omtsha wenkulungwane ye-21 kwaye inyani inyamalala: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	12 Agasti 2019	• 22 Comments
Yikholelwe okanye hayi, kodwa indoda engatshatanga sele iza kubhujiswa. Akunjalo kuba oku kuhamba kwiinkqubo zendalo kwaye amadoda kunye nabasetyhini abasayi kuzalwa, kodwa ngenxa yokuba i-biotechnology kunye nefuthe leekhemikhali liza kuyikhawulezisa le nkqubo. Inyani yokuba ukuveliswa kwesidoda kulinganiswa kwihlabathi jikelele kukhethekile ngaphakathi, kodwa inyani yesibini yokuba le ndlela yokulinganisa ibonisa ukwehla okukhulu kuthetha okuthile malunga nenqanaba le-testosterone ephakathi eluntwini kwaye ke malunga nokuhla kobudoda ngokubanzi . "Phakathi kwe-1973 kunye ne-2011, inani leeseli zesidoda lehlile nge-59,3% ngaphandle kobungqina 'bokuthambisa' kwiminyaka yakutshanje."Babhala abaphandi abavela kwiiyunivesithi zamanye amazwe kwingxelo yabo.
Kukho nezandi zokuba iiplasitiki kwindawo ezihlala kuyo ziphela egazini labafazi abakhulelweyo kwaye zivalelene ne-testosterone esibelekweni, iyeka ukukhula kobudoda (jonga apha).
IVF ibonakala ingumzuzu apho unokutshintsha khona ikhowudi yemvelaphi yeseli kunye nonyango olunxulumene ne-hormone olunokusebenza ukuhambisa isondo kwicala elithile. Nge-IUI (i-Intra-Uterine Insemination) iiseli zesidoda kuqala zihlolisiswe kwelebhu kwaye "ngokuthe ngqo ngexesha elifanelekileyo" ityhubhu ngqo esibelekweni. Ngokuzithemba sizithemba zonke ezi ndlela zokungena, kodwa kwenzeka ntoni ngexesha lomsebenzi? Ukurhanelwa kwam kukuba ukungenelela kwabantu ekuzaleni kwendalo kudale indawo yokuqhuma kwenani labantu abathandana nabesini esahlukileyo nokwandisa ukudideka kwesini. Oku kongeza kwimpembelelo yeekhemikhali zeplasitiki kwindalo esingqongileyo kunye nokongeza kokusebenzisa iindlela zokugonya ukuba zibe nefuthe.
Ezopolitiko sele ziphambi komculo kwaye zibeka udluliso kunye nokudideka kwezesini phezulu kwi-ajenda, ukuze abantwana abakwizikolo zaseprayimari, umzekelo, ngoku bafumane imfundo yezesondo kwaye bafundele ukuba isini sabo asifanelanga kujongwa zizini ezabakho ngazo. kodwa ukuba basenokuthi bakhethe isini sabo.
Ukuba ungaphezulu kwamashumi amane, unokuba uqaphele, njengam, ukuba baninzi ngakumbi nangakumbi uEllie Lust okanye uEllen DeGeneres (yintoni igama) uhlobo lwabasetyhini abahambahamba kunangaphambili, kodwa kwakhona 'amakhwenkwe amakhwenkwe', umzekelo. Ukucaca: andithethi le nto ikukhubekisayo okanye ethoba isidima, kodwa ndithetha nje ngeempawu zomzimba. Ezi mpawu zomzimba bezicace gca ngokucacileyo ukuba yindoda okanye into yesetyhini kumashumi ambalwa eminyaka edlulileyo kwaye kubonakala ngathi loo mahluko ucacileyo uyehla.
Ngamanye amaxesha ndiyazibuza ukuba ingaba wayengumcebisi wangaphambili kwibhunga lezempilo kunye nofuzo URonald Plasterk wenze igalelo elibalulekileyo kule nkqubo yokubonakala ngathi yeyesini. Ingcinga yam kukuba sinikela ubungqina ngenkqubo yokungathathi cala ngokwesini, ngoba sisendleleni eya kwinjongo esele icwangcisiwe, apho isimboli yelayini luphawu olucacileyo linika uphawu olomeleleyo lokuba ndilungile.
Emva kwayo yonke loo nto, uthingo lukuziko le-LGBTI, olo luntu lukhuthazwayo, umzekelo, kwindawo eyayisakuba yiGay Parade Amsterdam, ethi kwiminyaka yakutshanje iphinde yabizwa ngegama ukusuka kumbala wepinki ukuya kwimvula kwaye ukusuka 'kwi-Gay Parade' ukuya 'Pride'. Sikwabona into eninzi yokusasazeka kwemvula kwimithombo yeendaba phantsi kwekhava yegama elithi "ukulingana" okanye "amalungelo abantu." Konke oku kungafumaneka kwimihombiso yeengcambu zemvula, ukuwela kweemvula ngeenyawo, iinjineli zomlilo zemvula, izikhululo zerhasi yomnyama nokunye. Umnyama ubonakala luphawu lwayo 'yonke imibala ilingana'; ubuncinci yile ndlela eziswa ngayo. Uluvo lokuba umbala wolusu lwakho kunye nokukhetha kwakho ngokwesondo akunandaba nokuba wonke umntu uyalingana. Umbono onzulu, nangona kunjalo, unxulumene nebali lebhayibhile lomkhukula kunye nokupheliswa kobuntu bakudala. Amabali malunga nomkhukula omkhulu kangaka unokufumaneka phantse kuzo zonke iinkcubeko zakudala kwihlabathi liphela.
Umnyama ufuzisela indalo kaThixo esebhayibhileni. Uhlalutyo lwam apha kwiwebhusayithi lubangelwe nguThixo webhayibhile noThixo wezinye iicawa ngokwenyani ukuba ngumakhi wezinto ezimbini ezilinganayo esiphila kuzo (esizigcinayo). Oko kunokuvakala kuyinto engaqhelekanga kuwe, kodwa ukuba ufunde amanqaku kwiiveki ezidlulileyo okanye uye kwimenyu ephantsi kwesihloko 'Ukulinganisa'Yonke into icacile ngakumbi (kubandakanya nokufakwa ngenzululwazi).
Ibali lendalo, ithiyori yendaleko kunye nembali njengoko sisazi, banokuyiqonda ngokupheleleyo imodeli yokulinganisa ukuba siyaqonda ukuba ungayicwangcisa imodeli ukusuka kwi-z ukuya nembali kubandakanya nembali. Ukuba umakhi womdlalo wakha umdlalo we-intanethi ophuma phakathi, oko kubandakanya imbali. Le inokuba sisigidi-minyaka imbali yokuba "ukhona ngokwenene" xa uqala ukudlala umdlalo. Ukudalwa komehluko phakathi kwemini nobusuku, umoya, umhlaba, izilwanyana, abantu, nako kuhambelana ngokugqibeleleyo kunye nombono wokwakha ukumbumbuluza. I-bang enkulu kuphela kwengcaciso 'ukusuka kwinqanaba lomdlalo' kwindawo yokuqala umdlalo. Ke ukuba le Bhayibhile ithetha ngomkhukula apho uThixo wabatshayela abantu kunye neTyeya apho umntu we-1 wayigcina yonke iDNA, ukuze athethe ngokutsha, emva koko iphinde yabuya. Sonke siyayazi ukuba umnyama wawuphawu lwento enkulu.
Umnyama ke ngoko, ngokungathi kunjalo, luphawu lokucima "indalo yakudala" kunye nobuntu njengoko yayiza kwenza ukuqala kwakhona. Ngoku sikwisiqalo esitsha. Abantu beenkolo (amaKristu, kodwa namaSilamsi) bacinga ukuba i-transgenderism, esinokuyibona ngoku phantsi kweflegi yomnyama, luphawu lweBaphomet (oluchanekileyo) kwaye ke kuSathana (engalunganga). Oko kukungaqondi kufuneka kucaciswe. I-Baphomet, ibhithi e-bisexual (hermaphrodite), ayilophawu lukaSathana, kodwa luphawu lukaLusifa. U-Lusifa uza kubhengezwa nguThixo emva kwemfazwe yehlabathi yokugqibela ye-3 ngomhlaba ophakathi kwazo zonke iinkolo, eziya kuthi ke zihlale iYerusalem. U-Lusifa (ngokoluvo lwam) ungumakhi woluqokelelo kwaye ke unokuchazwa njengomyili woluqalo lwezinto ezimbini, apho ukuchasana kweenkolo kunye nokungahambelani kwezopolitiko kunye nazo zonke ezinye iinkalo zoluntu zisebenzela imodeli eyimbini yokulinganisa. U -Thixo-umfuziselo kaSathana (kabini) ke uLusifa ekufihleni okuhle nokubi; kanye njengombhalo wekhrismesi kunye ne-anti-christ.
Ngoku silapha ngaphambi komzuzu wokugqibela wesikripthi ukuba wamkelwe kwiinkolo eziphambili. Ukuqala kweskripthi kuqalile ngeGenesis 1: 27:
Wamdala ke umntu ngokomfanekiselo wakhe, wamenza ngokomfanekiselo kaThixo; wabadala baba yindoda nenkazana.
Sikufikile 'kumkhukula "omkhulu, apho uluntu luya kugxothwa. Sikwi-esveve yomzuzu apho indoda kunye nomfazi baya kunyamalala. Sijongelela esiphelweni seskripthi, apho ubumbhalo mbini kufanele ukhokelele kwimeko yangoku kwicala elifunayo, njengokudibanisa kunye nezibalo zokukhulula ibhetri evelisa okwangoku. Ixesha lifikile lokuba ubumbano lube nokudityaniswa ngaphakathi komzimba, ukuze iingxaki zobudlelwane kunye neemvakalelo zobudlelwane bendoda-nomntu obhinqileyo ngoku zenzeke ngaphakathi kwengqondo enye. Siya kwisimo somntu we-hermaphrodite (bisexual), njengophawu lokuzalisekisa iscript, apho ubuntu busekwe umyalelo wenkululeko yokuzikhethela ndawugqiba kumjelo oxineneyo kwaye ngokuzithandela walandela iskripthi (nangona ibimfilie ngobuqhetseba nenkohliso). Ke ngoko siya 'kwisini-kungathathi cala' (bisexual) umntu njengomfuziselo wokwakha okulinganisa: uLusifa. Umakhi wale simulation sele etshabalalisile ubuntu (njengenxalenye yesikripthi esikhulu somdlalo) kwaye ngoku ushenxisa indoda njengengcamango yendoda-yomfazi. Kungenxa yoko le nto umnyama uluphawu lwabahlali be-LGBTI.
Eso sisiqalo nje, kuba yonke "indalo" (okanye ukumbumbuluza njengoko sisazi) nayo iya kucinywa. Akuyonto ingento ukuba imeko yendalo iyindlela yokufaka uluntu ngakumbi ngokwezezimali (ngeendlela zerhafu) ukanti ukutshutshiswa komhlaba kuyaqhubeka nokuhamba. Umhlaba wenziwe ukuba ungathandeki, ukuze ubuntu benziwe bawulungele umbono 'wezulu elitsha nomhlaba omtsha' kwiinkolo. Ukonakaliswa kwempilo kunye nokusingqongileyo kuya kunyanzela uluntu (ukongeza kwisilingo seeplanethi ezikude ezinokwenzeka) ukuthatha indlela ye-transhumanization. Kwiminyaka ezayo asiyi kuguqulwa nje sibe ngabantu be-transgender, kodwa kunye nakwi-androids. Ukongeza, imiba enjengokusombulula i-Alzheimer's kunye ne-dementia, kodwa nokutshintsha imilenze okanye ukwenza imfama iphinde ibone, zizinto zokuqala ezenza ukuba bamkele uphuhliso lobuchwephesha oludibeneyo. In eli nqaku Ndanikeza umbono wendlela izinto ezenzeka ngayo ngoku kwaye uya kufumana ingxelo yenkampani ka-Elon Musk yeNeuralink, ukusuka apho ungabona ukuba asikude kude kumda wokudityaniswa kwabantu kunye ne-AI.
Isintu (i-avatar yomntu, ngubani ophefumlelwe yintsusa yakhe engaphandle kwesi simulation) uya kuyishiya le "indalo" njenge-transgender transhuman, kunye nenjongo yokugqibela yokufakwa kwi-AI yeLuciferian. Le nkqubo iya kwenzeka ngakwelinye icala ngesilingo (ukususa izifo, ukusombulula ubumfama, ukuyeka inkqubo yokwaluphala) kwelinye icala ngokutshabalalisa umhlaba kunye nenqanaba lobomi bawo.
I-avatar echasene no-christ, kanye njenge-messiah avatar (inxalenye yesibini yencwadi ebhaliweyo), iya kuba yinto yegalelo kulo mlinganiso wokulukuhla umntu ngokubhekisele 'ezulwini elitsha nomhlaba omtsha' nakwindlela eya 'kubomi banaphakade' ( ukungafi kwe-transhumanism). Yonke le nto iwa kwindawo xa sele uyibona. Le nkqubo iqikelelwa ukuba yenzeke kumashumi eminyaka ye-2 ezayo (kuba ilungela zombini iskripthi sesiprofetho kunye nokukhula kwengqondo kwezobuchwephesha) kwaye ngenxa yoko zonke iindlela ziya kuthunyelwa ekufumaneni indoda ye-hermaphrodite kwisizukulwana esinye. Ugonyo lunokudlala indima ebalulekileyo koku kwaye ke siya kukhawuleza ukuva ukuba ukugonywa kuya kuba ngumthetho emhlabeni jikelele. Konke oku kuyakwenziwa ngetekhnoloji enolwazi lolwazi lweeseli kwi-genome yomntu, kodwa ukrokrelo lwam kukuba i-hermaphrodites sele ilungile ngeenxa zonke kuthi kunye nokuba itekhnoloji yokufezekisa oku ngokuguqulwa kwemfuza sele ilungile.
Ufunda eli nqaku kwakhona ukufumanisa ukuba oorhulumente bafuna ukuba kanjani ne-DNA yomntu ngamnye kwindawo yedatha kwaye bafumane kuyo eli nqaku Zeziphi iindlela ezisetyenziselwa ukwenza umthetho wokugonya eluntwini. In eli nqaku Ndicacisa ukuba i-network ye-5G iya kuqengqeleka njani ukukhawulezisa ukuthunyelwa kwabantu. Yonke itekhnoloji iyakhona ukuze ifezekise i-ajenda. Lixesha lokuba uye kuyo ngokuqinisekileyo kwaye ungasacingi ukuba akuyi kuhamba ngokukhawuleza. Kutheni? Kuba i-ajenda yobukhoboka bokugqibela kwaye uya phambili kude kwakwintsusa yakho.
Uludwe lwekhonkco lovimba: ishishiniinsider.com, ngkubonk.nl
Ingqungquthela yepompo ye-transgender: kutheni oko?
Isiqhelo esitsha asiqhelekanga (okanye enye indlela?)
I-DWDD, VI, van der Gijp & Derksen kunye nokuguqulwa kwe-VTM intatheli yaseBoudewijn esuka eSpilbeeck ukuya eBo
tags: baphomet, eziziimbalasane, ngesini, i-hermaphrodite, lucifer, engathathi hlangothi, entsha, yinto yamihla le, Plasterk, i propaganda, utolo, URonald, uSathana, transgender, transhumanism
12 Agasti 2019 kwi-09: 43
Inqaku elilungileyo ngokwemeko yomxholo kunye nemfundo enkulu kakhulu. Ndiyatyhola ukuba uThixo (u-Elohim okanye uthixo) oseBhayibhileni, phakathi kwabanye, yayingabafundisi bezesayensi (abaneshologu) kwaye bona ngokwabo babephenjelelwa ngokwemfuza ngabantu ababesinde ekubhubhisweni kwempucuko yabo. Ndiyakholelwa ukuba akufanele sithathe ingqalelo yokuba uThixo njengeluciferic transcendent organisation. Singabezidalwa eziguqulwe ngokwemfuza kwaye ziphethwe yiyo. Abo thixo benza le nto bayifunayo ngezidalwa zabo.
Ndicinga ukuba uMnu. Epstein uyaphila nje kwaye isekisi yonke yenzelwe izinto ezimbini. Ukuze sikwazi ukucima iingxelo ezivela kulawulo lweendaba njengelinye 'ubungqina' eliqinisekisiweyo kwaye nokumakisha bonke abaxhasi babo njengababegrogrisi nabanobunkunkqele. Kwaye ngokuqinisekileyo ukubambelela kumxholo we 'pedophilia' ebantwini ukwenzela ukwenza indawo yokuhlala nokwamkelwa kwenzeke ngokungathi 'yinto eqhelekileyo' yokwabelana ngesondo.
12 Agasti 2019 kwi-11: 32
Enkosi kwakhona ngeli nqaku libalaseleyo!
Unxibelelaniso olunjani lokuqaqamba ozenza kunye namacangci emvula njengophawu kunye nothelekiso kunye nomkhukula webali likaNowa. Uhlobo lokuphawula 'ngokwenyani yokwenyusa' iklabhu efuna ukuyiphumeza kakubi.
Kwi-fb sele kukho amaqela amaninzi afumanise ukuba 'umkhukula' usandula ukwenzeka; ngeenxa 1850. Yaziwa ngokuba ziiMddfloods; apho umhlaba wakudala wawakhiwe kakuhle usebenzisa amandla asimahla kunye nokuziphatha okuphezulu; safakwa eludakeni olunzulu zixhobo zamandla. Yayingumsebenzi omkhulu lo; yitshabalalise yonke into; iimfazwe, ikhaya leenkedama eligcwele ngabantwana kwafuneka bazokwakha izinto kwenye indawo. Beka wonke umntu kwioyile, igesi kunye nesikhululo samandla, ngeli lixa i-elite isakufumana 'kwi-aether' enqatshelwe yisayensi iMafia.
Ke baba zizityebi kwaye banamandla, batyikitya izivumelwano zabo ukuze wonke umntu abe likhoboka, kunye namaziko abo e-3 eVictoria City (konke kwaqala e-Itali ngebhanki yokuqala "uGeorge" eGenoa), eLondon City naseWashington DC, ngaphambi kokuba bambe yonke into kwi kubandakanya neTemplars, kusetyenziswa amaJesuits. Ezi zi-3 ekugqibeleni ziya kusiwa kwilizwe labo '; U-Israyeli. Ubathathu emnye kwi ...
Ibali elinzima, kodwa injongo yayilulawulo lwehlabathi kwasekuqaleni. Kwaye ubuchwephesha sele baziwa ixesha elide, kodwa ngoku busebenza ngokweenkcukacha.
Kuyothusa xa ulandela umzekelo Sir (!) UMartin Rees; Umntu ovumisa ngeenkwenkwezi ongumNgesi ofundise ikholamu enye emva kwenye kwiiyunivesithi ezinkulu. Akukho ndawo apho kufundiswa khona i-ether kunye namathuba okusebenzisa kumhlaba we-electromagnetic. Oko kwenzelwa kuphela izinyobo kunye nabathengisi abamnyama (ngenxa yokuphathwa gadalala kwabantwana).
Uthe cwaka ngokungcoliseka kwethu, ukuze 'imitha yelanga iphela' ibe yingozi kwaye kufuneka sithathe inyathelo ngokuchasene nayo. Kwaye ke zonke iintlobo zeengxelo eziphosakeleyo zobuxoki eziphezulu zithunyelwe emhlabeni, ezo zopolitiko noomasipala 'kufuneka bazithathe' ngokungathí sina. URes, ngokwendlela, ujongeka ngathi uyimbumba yeTesla kwaye bafana nombulala u-William Hare, owathi e-Edinburgh ngelo xesha wanika abagqirha izidumbu kunye nabantwana abafileyo ukuba baphandwe. Iipaseji eziphantsi komhlaba e-Edinburgh ngoku zinabakhenkethi. Ibali liya ngokuba uHare, njengo-Epstein ngoku, usandula ukukhululwa entolongweni ngamapolisa .... (uxolo uhambo olusuka kum).
Malunga nale nto kaLusifa noKristu; U-Lusifa ngokuqinisekileyo unesizathu kunye nefuthe; Ukubakho kwengqondo kwindalo iphela. Umama ngumbala obangela ukuba ingqondo yomntu wonke (njengefilim kwiscreen sefilimu) yenzeke. Umntwana yile nto uthetha ngayo, uLusifa odala i-duality kwimithetho emiselweyo, ukumbumbuluzwa. Lo mama ugcinwa kude kwaye ngasese 'asetyenziswe' kuzo zonke izinto zabo zokudlala zedatha ezinamandla ombane kunye nezixhobo, ukutshintsha kwemozulu (uHarb) njl njl.
Kule veki bekukho inqaku kwi-Psychologist; apho izazinzulu zifumanisa ukuba kufuneka kubekho ingqondo yendalo iphela engaxhomekanga kubuchopho. Ngapha koko, ukusebenza kwengqondo kuyayithoba. Kungenxa yoko le nto iziyobisi ezivuselela amandla obuchopho bakho zinomtsalane, kuba emva koko uzuko lwengqondo iphela iphela. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/think-act-be/201908/how-is-consciousness-related-the-brain?fbclid=IwAR0SIUfeJTdELBScEKSQvzosfz_r6z7E64nrueSpp-jRNBsCFqMgwi5HZBM
Kodwa kukwafumana isodomy, esetyenziswa 'ngabaseLuciferians', esele inabantwana abancinci kakhulu, kubangela ukuhlahlakala kwelenza esengqondweni; oku kubangela ukuba i-pineal gland ivelise i-DMT, ngelixa ibangela nosizi olukhulu. Ngokufaka ezi khowudi zinamazwi angena ngaphakathi, njl njl. Banokukwazi ukulawula ingqondo yomntu.
'I-gay yekratshi' kule mihla ine 'Canal yekratshi' equkethe igama 'anal'. Kwaye K e-Kanaal (eyenziweyo njlnjl) njl.
Umahluko omkhulu ulele ekusebenzeni kwengqondo epheleleyo, okanye ukuba utyhilelwe kwingqondo eyahluleleneyo, apho i-hemisphere enkulu ichukunyiswe, njengakwi-AI nakwimfundo yangoku, ukusetyenziswa kwamayeza noluntu.
Sele ndivile iingxelo ezininzi kwaye ndinamava wokuba ukuvuselelwa kwengqondo epheleleyo yikhodi kaKristu; Ke ngokwenza ezi zinto zikhuthazwe, abantu bayakhululeka kwiikhowudi zabo zengozi nolawulo lwengqondo.
Oko kuya kuthetha ukuba uhlelo luzisiwe kwingqondo yeLuciferian Universal, ethintela kwaye iphilise xa ufakwe ngaphakathi kwiseli-ingqondo. Okanye ingqondo enomhlaza.
Ngamanye amagama; ukuba uLusifa njengengqondo iphela, sele kuthatyathwe indawo (kwasekuqaleni) ngu-Kristu-ingqondo; eqinisekisa ukuba uyaqhubeka nokuqonda kwaye uyenza isebenze, okoko kusenziwa.
Iinjongo zamaLuciferians (amaSabbate, amaFrankinists, i-Illuminati) kukuphinda i-Lusifa endala kwaye kungoko kulawula kwaye kuphathise ukulingisa. Ukusuka kuloo mlinganiso 'wamaYuda' abantu abanyuliweyo abatsha. Okuseleyo kunokuba likhoboka leerobhothi.
Bayenza njani loo nto xa uLusifa ebhalwe ngaphezulu nguKristu?
Kukho elinye icala likaLusifa, icala lokuqhatha apho inkululeko inokuthatha ikhosi, logama nje kungekho bungqina bukaKristu obekiweyo. Umntu ngoku kufuneka ayenze 'ngokwakhe'. Inkqubo ibilisiwe, kodwa abantu kufuneka bayisebenzise.
Icala lobuqhetseba likaLusifa, okanye isibini, asinguye uKrestu, kuba uyibhale ngaphezulu yonke.
Ubizwa ngokuba ngu-Ahriman; umoya wetekhnoloji ngeenjongo zokutsiba izidalwa zoqobo lwazo kwaye uzibandakanye ebukumkanini bakhe. Ngamanye amagama, nguSathana. Yile nto uyichaza uyichaza kwaye uyicacisa.
Ke bafuna ukuxelisa yonke inkqubo kaKristu njenge-hermaphrodite kunye ne-transgender. Oko kuthetha ukuba unqunyulwe ngokupheleleyo kwinto yakho yasekuqaleni, kwaye ungabi namava onxano.
Kuyinyani ke ukuba yonke indawo ngoku yaziswa imithetho kaNowaide, ethi isebenze kamsinya nje emva kokuba 'umthetho wemfazwe' uqalisa ukusebenza. Le mithetho ichaza, kwaye le ityikitywa ngabo bonke oomongameli, eyokugqibela enguTrump; ukuba wonke umntu okholwayo kuKrestu uthathwa ngokuba ungumnquli-zithixo kwaye unqunywe intloko !!
Ndiyathetha. Zigcine ulungile kuwe. Ibonisa ngakumbi nangakumbi into esemngciphekweni.
Ndacinga ukuba ndiza kuphendula ngale ngxaki kuba ndicinga ukuba inegalelo nangakumbi ekufumaneni ukuphuma.
U-Kristu uthi kwenye indawo kule Bhayibhile; Akukho mntu uzayo kubawo (owokuqala) ngaphandle kwam. Ngokwenyani awathi; ngapha koko ulahlekile kwaye uyakhohliswa. Akazange abize izithethe, iimfundiso okanye ukunqula uThixo, kodwa ngenxa yokwenzeka kwengqondo epheleleyo (egxile kwiNtliziyo, zininzi iiseli zobukrelekrele kunokucinga); kwaye uqaphele kunye nokulinganisa kwaye ungayamkeli njengeyinyani, kodwa ulindele kwaye wamkele yonke into ephantsi kwayo (uBukumkani). Oko kunokwenzeka kuphela ukuba unokuzijonga ngaphandle kokulinganisa. Ngokuchanekileyo kwaye nakwinkqubo yakho yokufa.
Kuyinyani ukuba zininzi kakhulu ii-zombies esele zihambahamba ezingakwaziyo ukwenza le nto, kuba sele ziyimveliso yokusetyenziswa kobuchwephesha kwaye ngenxa yoko azisenakufumana eyentsusa, kwaye zingenamdla wokuzihlola. Banokufunda kwaye bakope. Amehlo abo ahlukile kakhulu. Abakuboni ukufunda kwabo. Nguwo lo lo uqhawula umtshato; abo bangasenawo umphefumlo ongaboniyo bajoyine i-Ahrimanic AI. Abanye banokusebenzisa inkqubo ye-Kristu.
Ngokuthatha ukucamngca kunye neziko lentliziyo njengesikhokelo. Xa ucamngca, inkqubo (ebeka kwiscreen sefilimu) inokuvuseleleka kwaye ithathelwe indawo yi (Christ) Intliziyo. Oweyantlandlolo.
Kwakhona, enkosi kakhulu!
12 Agasti 2019 kwi-11: 41
Nceda uqaphele: isithembiso esingokonqulo 'sezulu elitsha nomhlaba omtsha' sinokuzaliswa ngokulula ngendlela yokulinganisa (isifaniso sokulinganisa kwangoku). Ungathumela ngokulula umntu idijithali ukuba "ndiqokelele iScotty" "kwiplanethi ebonakalayo" (ngaphakathi kokulinganisa okwangoku). Yiyo loo nto sibona iingxelo ezininzi ezindabeni ezivela kwiiteleskopu zeNASA ezifumene iplanethi enokwenzeka kwakhona, yiyo loo nto i-SpaceXon ka-Elon Musk ifuna ukuya eMars.
12 Agasti 2019 kwi-13: 43
Bangaphi abantu be-transgender okwenyani eNetherlands xa kuthelekiswa nabantu abangathathi ntweni, kwaye oko kuxhomekeka ekubeni kwiqela elithile labantu? Ngaba kukho unxibelelwano phakathi kokutshutshiswa okwenziwa njlnjl kunye ne-transgender?
Ngubani oh owaziyo lento?
I-Nasa njl.njalo ikwimeko efanelekileyo yokukhangela ubuncwane be-'elite' yokuphambukela.
Abemi abaqhelekileyo bacinga ukuba yonke into ihamba kakuhle.
12 Agasti 2019 kwi-23: 41
13 Agasti 2019 kwi-10: 28
Ndifumanise ukuba ukusuka kwi-2015 ukuya esiphelweni se-2017 inani lezinto ezitshintshileyo liphindaphindwe kabini xa kuthelekiswa nexesha elidlulileyo le-2015. Ngaba ixhaswe ukusukela kwi2015 ukuba ibe yinto edlulayo? Ngabavuyela ogqirha? Ixesha lokupapashwa okukhulu malunga nokutshintshwa kwezinye izinto? Iinkcukacha-manani nazo azibonisi imeko yengqondo yabo baye batshintshile. Kubi kakhulu. Ngendlela, kukho iimpazamo ezininzi zokongeza kwiinkcukacha-manani ze-CBS? Ngaba iinyaniso ezisisiseko zichanekile nengxelo ye-CBS?
12 Agasti 2019 kwi-23: 49
Isongezelelo nje kwikhonkco eselifakwe kwiCentral Bureau ye Statistics:
Kukho ubuxoki obukhulu kakhulu
kwaye kukho amanani ...
12 Agasti 2019 kwi-13: 17
Ukuhamba kolwazi akusayi kugcinwa ngumntu ophakathi.
Oomama abaxhuzuli (kusekho) nootata (abasekhona) abaneefowuni eziphantsi koxinzelelo
babanjiswe yiyo yonke loo nkqubela phambili yobugcisa. (funda iziphumo ezonakalisayo kuluntu, izidalwa nezityalo kunye nezilwanyana)
Ngoxinzelelo lwepilisi yoxinzelelo (depri) kunye nesibophelelo esiphathwayo,
12 Agasti 2019 kwi-15: 16
Ngokwenene isikhonkwane -> Inqaku eliphambili .. Ukuncoma, kuba wonke umntu oku kubalulekile ukubona.
Ukuba ngeli xesha lobomi awifumanisi ukuba yonke into yinkohliso (ungubani kanene?) Kwaye uzimanyanisa nolu nkohliso (indalo ebonakalayo) uya kuphinda wenzwe kwakhona ngayo yonke imiphumo (ugonyo olunyanzelekileyo okanye i-chip, okanye ke wena ngu "de Sjaak";)
Ngaba uyayifuna ipilisi eBlue okanye ipilisi eBomvu?
Musa ukungathathi hlangothi, Yiba nguKhetho-ungaphantsi, ungayondli ibhetri kwaye ugcine amandla akho (endaweni yokuyinika kude!).
Emva koko unokukwazi ukuthatha indlela emxinwa ..
(Iya kwinkululeko ..;)
13 Agasti 2019 kwi-01: 58
Ngamanye amaxesha ukuwafunda la manqaku kuya kundifikela ukuba ngaba konke kuya kuhamba ngokukhawuleza kangaka. Emva koko ndiza kukhangela ezinye iinkcukacha kuGoogle.
Ngale nqaku ndiye ndabuza ukuba bafundisa ntoni kanye kanye abantwana kwesi sizukulwana. Ewe, kubonakala ngathi ukusukela kwi2012 kuye kunyanzelekile ukubonelela ngemfundo yesondo kwisikolo saseprayimari. Isikhokelo saseYurophu senziwe oku kwi-2010 nguMbutho wezeMpilo weHlabathi, iofisi kwi-Europe.
Emva kokufunda matrix wokufunda kwiphepha 38, ndingafikelela kwisigqibo sokuba ezi zezona zinto ziyinyaniso zamagama kaLenin: "Ndinike isizukulwana nje esinye sobutsha, kwaye ndiza kuliguqula lonke ilizwe."
Isilumkiso se-Spoiler: I-WHO ichaza kwimatrix yokufunda ukuba imfundo yezesondo kufuneka iqale kwinqanaba le-0-4 yeminyaka…
13 Agasti 2019 kwi-07: 47
Akuyonto ingekhoyo ukuba ibhokhwe lithetha 'Oyena mkhulu ngamaxesha onke'.
Umyili wexesha, ukulibaziseka kokukhanya. Ndibona amasiko neemfundiso ezifanayo ezimbini kuzo zonke iinkolo kodwa nakwinkcubeko yakudala efana nenkcubeko yamaMaori. I-Israel = Isis (inyanga) + Ra (ilanga okanye unyana) = Elohim = umbane.
Kuyenzeka ukuba uLusifa angavumeli eli lizwe ukuba lithathwe (kakhulu) ngabantu abanjengoBill Gates no-Elon Musk kunye nabo bonke abahlobo babo bedijithali. Kungenzeka ukuba eli lizwe liya kuba nzima ukuseta kwakhona ukugcina umhlaba o-dualistic uphila. Ukuba uLusifa ngu-duelistic kwaye unemikhosi elungileyo kunye engalunganga (iingelosi kunye needemon) ngubani omele ondliwe? Umhlaba wawukukuwona mninzi uphezulu amaxesha amaninzi ngaphambili, kwaye ukuba uluntu luye wanamathela kwiDNA kwaye bathungela yonke into ngokwenyani nangokomfanekiso. U-Lusifa waphulukana nolawulo kunye nokubuyisela kwakhona yonke into. Ekuphela kwento anokuyenza ukubuyela kukuyila kwakhe kwexesha.
Nam ndiyavumelana ne-Mindsupply Kukho indlela enye kuphela kwaye ukungathathi hlangothi. Ayiblowu, ayibomvu, kodwa indlela emxinwa phakathi.
Ngokwenene inqaku elilungileyo ngethemba lokuba abafundi bayayiqonda indlela elibaluleke ngayo eli nqaku!
13 Agasti 2019 kwi-09: 19
Indlela kuphela yokungathathi hlangothi? Oku kubhekisa kubundilele. Igama "ukungathathi hlangothi" ligama elisulelweyo, kodwa ngqiqweni liyinyani elithi ukuxhathisa kuqinisa ubumbala. Ngokombono wam, ukungathathi hlangothi akufuneki kudideke nokudlula.
Olona hlobo kuphela kwalo kukukhumbula ukuba uthatha inxaxheba ekulinganiseni (ungumdlali obonayo kwisimangaliso sentsholongwane kaLuciferian).
Emva koko uza kubona ukuba ungakohlula intsholongwane, kodwa hayi kwinqanaba lomdlalo. Imalunga nokukhumbula ukuba ungubani na: indlela yokuqaphela engabalulekanga kuLusifa. Lixesha lokuba icinywe le ntsholongwane kwinqanaba lokwazi. Oku kufuna ukungahambisi lula kunye nokunceda abantu (iifom zokwazi ukuba namava okusebenza kwentsholongwane) ukukhumbula imeko abakuyo.
13 Agasti 2019 kwi-10: 35
Ukungathathi hlangothi akuthethi 'ukungathathi cala ngokwesini' (oko kukuthi ukuthelekisa iiapile ngeepere), kwaye akuthethi ukungathobeki. Ngaphezu koko, oko akuthethi ukuba awunalo uvelwano okanye imvakalelo (ngokuchaseneyo). Kuphela kuxa uqhelisela ukungathathi cala apho ugcina ezi mpawu ngokungaphezulu ngaphandle kokugweba okanye ukhethe ukuba uzahlulele.
Ukuba 'ulunge kakhulu', uyondla 'ububi' kunye nokuphikisana.
I-1 bilionire ibangela abantu abaninzi abangenakhaya / abahluphekayo kwaye ngazo zonke izinto ezilungileyo zenzekile kwenye indawo .. Oko kulungelelana kuya kuhlala kulapho .. Leyo yimithetho kunye nemithetho kaLusifa. Ukuba awuthathi nxaxheba, ke kufuneka unabo uLusifa kunye neebhola. Oko akunanto yakwenza nokugqitha (ngokuchaseneyo).
Ukungathathi hlangothi akulula kwaye akuyi kuhlala uphumelela .. Kodwa ukuzabalaza kuya kukunceda unganikezeli amandla onawo kwaye kuya kukwenza womelele ngokomoya kuba ugcina amandla akho. Uya kudinga loo mandla ukuze ekugqibeleni woyise uLusifa.
Ndiyakholelwa ukuba ukuba 'nolwazi' malunga nokulinganisa akwanelanga. Ukongeza, kuya kufuneka (ungathathi hlangothi) ungathathi hlangothi kwaye ubonise ukuba abasenako ukuthatha amandla akho (kuba awusadlala kunye ..)
Kwaye ukuba le nto ithunyelwe apha nceda uncede abanye abantu bacinge ngayo ..; )
13 Agasti 2019 kwi-10: 36
Ukungathathi hlangothi kunye nomnyama kuthathwa kancinci. Ukuba awuzivumeli ukuba ulahlekelwe, ngoko ke awuthabathi cala. Inqaku leli kukuba emva kokuba uswelekile uneempendulo ezifanelekileyo zokuphuma.
13 Agasti 2019 kwi-12: 30
"... ukuba uLusifa akavumeli eli lizwe ukuba lithathwe ngabantu abanjengoBill Gates, Elon Musk nabo bonke abahlobo babo bedijithali"?
Ngokuchasene noko, aba bantu basentliziyweni yenkqubo yokuxuba abantu nge-Xiferian AI. Abo bantu babeka imasisi kwimephu yendlela eya kwicala (lobuxoki).
13 Agasti 2019 kwi-19: 14
Kuyinyani, basebenzela umkhosi ongenguwo. Ngaba umkhosi oqinisekileyo uya kuba nakho ukwakha yonke into. Bomvu kwaye luhlaza okwesibhakabhaka kunye nomnyama nomhlophe.
13 Agasti 2019 kwi-19: 22
Ngapha koko, sidalwe ngokomfanekiso wakhe. Wayilibele nokuba yeyakhe yoqobo, ke wabethwa phantsi. Ukuba silandela umzekelo wakhe, siya kwenza okufanayo. Ukhetho lolwethu.
14 Agasti 2019 kwi-07: 39
NDIMDLISE OKANYE UKUZE UZE UQINISE!
16 Agasti 2019 kwi-10: 18
Umatshini wokusasaza uqhubeka nokuqhuba ... kwaye ngesoftware encinci ungadala yonke i-footage oyifunayo ukuba wenze ibali ... kodwa u-Freek?
19 Agasti 2019 kwi-23: 04
Yhu yhu yingoma
23 Agasti 2019 kwi-18: 34
Ukulawulwa kokuzalwa akubuyiswa yi-inshurensi yezempilo. Isizathu esinikiweyo kukuba ayisiyomfuneko yezonyango. Ukuguqulwa, iihormoni kunye nayo yonke isekethe yabantu abaza kuhamba ngequbuliso kunokuba njalo. Kwaye ngokuqinisekileyo ugonyo kunye nokuntywila (kubafazi). Ngokudibeneyo zonke iintlobo zonyango lokuchuma. Abanye abantu bakufumanisa kunzima ukuhlawula ukhathalelo lokubelekisa komnye umntu. Ndikufumanisa kunzima ngakumbi ukuhlawula olu hlobo lokuphazamiseka; ngokuthe ngqo nangokungathanga ngqo kuba iya kuba neziphumo ezininzi zempilo yakho kwaye inokusebenza.
19 Oktobha 2019 kwi-09: 42
Siye sagqibela phi eGameni loXolo (Greta from diapers for thezulu)
kwaye lo mntu kule vidiyo ingezantsi uphume kwi-diapers yeLghbt)
Kuthatha isizukulwane esinye, bayakhawuleza.
« UJeffrey Epstein uyazibulala esiseleni (uhlaziyo)
Umnyama umela inkolo ethandabuzayo ngelixa abaxhasi becinga ukuba balwela 'iyantlukwano nokubandakanywa' »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.840.277
guppy op Ibhayibhile sele yenziwe ukuba kungathathelwa ngocalucalulo ngokwesini, kodwa umsebenzi uyenziwa kwi-Quran engathathi hlangothi